Avy any Thailand ka hatrany Singapore ~ Journey-Assist - Avy any Singapore mankany Thailand
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Avy any Thailand ka hatrany Singapore
Avy any Thailand ka hatrany Singapore. Avy any Singapore mankany Thailand
Ahoana ny fomba hionona any Thailandy mankany Singapore
Avy any Bangkok amin'ny fiaramanidina
Ny sandan'ny sidina avy any Thailand ho any Singapore dia avo be. Amin'ny zotram-piaramanidina orinasa iray, mitentina eo amin'ny $ 50 ny sidina, ny vidin'ny fiaramanidina dia mametraka vidiny amin'ny $ 100-120 lafo kokoa. Ny sidina mivantana dia mandeha amin'ny seranam-piaramanidina roa any Bangkok - Suvarnabhum sy Don Muang. Ireto orinasa manaraka ireto dia manidina any Singapore avy eto: Tiger Airwais, Jetstar Asia, Lion Air, Air Asia, Scoot Privat Limited. Mitaky 2,5-4 ora ny dia (samy hafa ny mpitatitra).
Any Singapore, ny fiaramanidina miondrika ao amin'ny seranam-piaramanidina Changi, izay heverina ho iray tsara indrindra eto an-tany. Izy io dia terminal vaovao maoderina miaraka amin'ny zavatra rehetra ilainao ary tena mety ho an'ny mpandeha: misy ny efitra fandroana, trano fisotroana, valizy. Manomboka any Changi ka hatrany afovoany, dia afaka mandeha taxi na metro ianao.
Avy any Bangkok amin'ny bus
Safidy mora kokoa dia ny mankany Singapore any an-drenivohitra Thai amin'ny alàlan'ny fitaterana an-tanety. Mba hahatongavana amin'ny bus, mila manao fifindran-toerana maromaro ianao. Tena mampihetsi-po tokoa izany, fa mamela anao hahita amin'ny fiainanao manokana ny ain'ny vahoaka Thailandey sy ny mponina avy any an-tany tsy misy fangirifiriana. Mba hanaovana izany, dia mila:
Avy ao amin'ny gara bus Bangkok ka hatrany Hat Yai Village, faritra misy sisintany amin'ny sisintany Thai-Maleziana.
Mandehana amin'ny fomba amam-panao, avy eo misambotra bisy vaovao. Raha zaka aloha dia mandehandeha mitety ny tanàna lehibe Maleziana rehetra ny fiara fitateram-bahoaka: Kuala Lumpur, Malacca, sns. Ny Minibus dia mandeha mivantana any Singapore koa avy any Hat Yai. Ny vidin'ny tapakila dia manodidina ny 600 baht. Naharitra 17 ora ny dia.
Ny fiara fitateram-bahoaka avy any Kuala Lumpur mankany Singapore avy any amin'ny fiantsonan'ny fiara Puduraya sy Bers integrated Selatan.
Nasaina hanisy tapakila mialoha ny làlana amin'ny Internet.
Avy amin'i Phuket amin'ny fiaramanidina
Misy sidina mivantana avy any Phuket mankany Singapore. Rehefa mividy tapakila dia tokony ho tsaroana fa ny orinasam-piaramanidina sasany eto dia mpamily fiaramanidina lafo vidy izay mivarotra tapakila amina vidiny mihena, saingy amin'ity tranga ity dia mila mandoa vola be ianao ho an'ny entana mitokana. Afaka manidina avy any amin'ny seranam-piaramanidina Phuket mankany Singapore mandritra ny andro ianao, satria misy fiaramanidina ampy tsara eto. Noho izany dia tsy afaka manao tapakila mialoha ianao, satria eo foana ny toerana malalaka.
Avy any Phuket amin'ny fiara fitateram-bahoaka
Tsy misy serivisy fiaramanidina mivantana. Teny an-dalana dia tsy maintsy manao famindrana roa farafaharatsiny. Voalohany, mila tonga any Hat Yai ianao, avy eo, mitondrà lalana mankany Kuala Lumpur na mankany Penang. Ny làlana ho an'ny olona iray dia mitentina 1 000-1 baht amin'ny fomba iray. Manomboka amin'ny gara fitetezam-paritany Phuket ka hatrany Bus Station, eo amin'ny 100-400 baht no takiana.